Saraakiil sare oo kasoo goosatey maamulka Somaliland
Saraakiil sare oo kasoo wareegey maamulka Somaliland
BADHAN, Puntland - Saraakiil Somaliland uga howlagli jirey gobolka Sanaag ayaa u soo wareegey dhinaca Puntland, waxaana goobjoog ahaa munaasabad loo sameeyey kala wareegaas Xildhibaano ka tirsan Barlamanka Puntland.
Labada Taliye ayaa maamulka Hargeysa u kala qaabilsanaa aaga Badhan iyo Ciidamada Badda Sanaag. Gurey Cismaan Saalax oo ah sarkaal caan ka ah gobolka Sanaag ayaa fadhigiisu ahaa magaalada Badhan isagoo halkaas ku haystey ciidamo.
Gobolka Sanaag ayaa wayadaan dambe waxaa ka socdey isbadalo dhinaca ciidamada ah, iyadoo saraakii ka soo jeeda degaankaas oo la shaqeyn jirey Somaliland u soo wareegeen dhinaca Puntland.
Munaasabada lagu soo dhoweeyey ciidamadaan kala wareegey ayaa waxaa loogu sameeyey degmada Badhan iyadoo dadweyne farabadan kasoo qayb galeen.
Madaxweyne Siciid Cabdulahi Dani ayaa dhowaan dalacsiiyey una magacaabey taliye ku xigeenka labaad ee ciidanka Booliiska Puntland Caydiid Axamad Nuur. Taliyahaan oo ahaa Korneyl ayaa loo dalacsiiyey Sareeye Guuto.
Wasiirka Qorsheynta ayaa gaashaanka ku dhuftay warar sheegaya in maamul loo dhisayo gobollada...
Abiy Axmed oo baahiyey khariirad liddi ku ah midnimadda Soomaaliya
Afrika 17.02.2020. 20:55
Villa Soomaaliya oo ka warbixisay kulanka Farmaajo iyo Muuse Biixi
Soomaliya 12.02.2020. 16:48
Feysal Waraabe oo dabciyey aragtidiisa wadahadalka DF
Somaliland 04.12.2019. 13:39
Baarlamaanka Somaliland oo cod u qaaday Guddiga Doorashooyinka
Somaliland 12.11.2019. 16:41